का`स्मिरमा फेरी अर्का नेपाल घर भएका गो`र्खा सैनिकले गु’माए ज्या`न ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/का`स्मिरमा फेरी अर्का नेपाल घर भएका गो`र्खा सैनिकले गु’माए ज्या`न !
काठमाडौं । भारत प्रशा`सित कस्मिरमा पाकि`स्तानी सेनाले गरेको का’रवाहीमा एक गोर्खा सैनिकको ज्या`न गएको छ । भारतीय स`ञ्चार माध्य`महरुले कस्मिरको रजौरे स्थि`त नौसेरा क्षेत्रमा पाकिस्तानी सेनाले ह मला गरेको दा वी गरेको छ । बिहीबार राति भएको सो घ`टनामा सम्बर गुरुङको नि`धन भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ।
उनको स्थायी ठेगाना गु`ल्मी भएको बताइएको छ। उक्त घ`टनामा घा’इते भएका गुरु`ङको अस्पताल पु¥याउनु अघि नै नि`धन भएको बताइएको छ । भारतीय रक्षा प्रवक्ता कर्णेल देभेन्द्र आनन्दले गुरुङ एक साहसी, उच्च मनोबल भएका र इमान्दार सैनिक भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘उनको कतर्व्य पालनाका क्रम`मा गरेको उच्च ब’लिदानीको मुलुक सधैं ऋ`णी रहनेछ’, उनले भनेका छन् ।
‘पाकिस्तानले दु’ई रा उन्ड फा’यर ग¥यो, यो गुरुङ बसेको ब’न्कर नजिक आइपुग्यो । बंकरको प्वा’ल बाट छि’रेको थियो, नतिजा गुरुङको अनुहार, पाखुरा र देब्रे खुट्टामा धेरै चो ट लागेको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘उनलाई अस्पताल लगिएको थियो । तर ज्या`न ब’चाउन सकिएन ।’ यस क्षेत्रमा पाकि`स्तानी सेनाले मध्यराती १२ बजेर ४५ मिनेट जाँदा का’रवाही सुरु गरेको थियो, जति बेला गुरुङ ड्यु`टीमा थिए ।
भारतको छिमेकी मुलुक कसै संग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । सिमानाका विषयमा भारतको सबै छिमे`की मुलुक संग राम्रो छैन । केही दिन अघि चीन संगको घट`नामा भारतीय सेनाका कर्णेल सहित २० जनाको नि`धन` भएको थियो । नेपाल संग पनि पछिल्लो समय सिमा`नाकै कार`णले सम्ब`न्ध विग्रि`एको छ ।